ကနေကောက်နုတ်ထားပါတယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် Making နှောင်းပိုင်းသြစတြေးလျ tantra ဆရာ Barry Long ကအားဖြင့်
လိင်ကစားနည်းများသည်ရဲရင့်သောဝီစကီကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ရဲစွမ်းသတ္တိကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားသည့်မှားသောစိတ်ဓာတ်များသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နေသည့်အရာကိုမေ့လျော့ရန်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်တူသည်။ အချို့စိတ်ကူးအနာဂတ်အတွက်ယခုလုပ်, မဟုတ်။ ဒါကြောင့်လူလုပ်တဲ့ကမ္ဘာမှာပုံမှန်လိုပဲအမှန်တရားဟာလက်ခံပြီးကျင့်သုံးနေတဲ့အပြန်အလှန်ပဲ။ ကမ္ဘာကြီးကဂိမ်းကစားတယ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလည်းမရှိဘူး။ အမှန်တရားကတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါအောင်လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ဂိမ်းကစားဖို့မလိုပါ။
စိတ်ကူးထဲမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိပါ။ ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းလိုချင်ရတာလဲ။ ခံစားချက်ရရန်? စိုက်ထူရဖို့? အနတ္တ။ သင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်နားလည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်အလေ့အထတစ်ခုကြောင့်သင်လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာချိုးဖျက်ဖို့အရမ်းခက်ခဲတဲ့အလေ့အကျင့်, ဒါပေမယ့်သင်ကလုပ်ဖို့ရှိသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုရန်သင်၏စိတ်ကူးသည်မလိုအပ်ပါ၊ အကြောင်းမှာသင်သည်တကယ့်အရာနှင့်အတူရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အသက်ရှင်သောယောက်ျားသို့မဟုတ်မိန်းမသည်သင့်အားစိတ်ကိုမဟုတ်ဘဲလူ့ဇာတိ၌သာမကအရသာရှိသော၊ ပျော်စရာအကောင်းဆုံးခံစားမှုကိုပေးသည်။
မြေကြီးတပြင်လူများတို့သည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများက hoaxed ပါပြီ။ ဆင်းအသက်အရွယ်အားဖြင့်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်ပုံရိပ်ပြင် Self-မောဟနဲ့ကြမ်းကြုတ်သောစွဲလမ်းကြောင်းကိုသတိမမူမိခြင်း, စိတ်ကူးစိတ်သန်းမေတ္တာ masturbating နှင့်အောင်ပါပြီ။ လူတိုင်းအတွက်တူညီတဲ့မူးယစ်ဆေးအတွက် indulges သောကြောင့်, ယင်း၏မေတ္တာမဲ့ ESCAP မှာအားလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားထားကြောင်းမရှိဘဲပုံမှန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ပင်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့အားများစွာသောလူထမည်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ကြပါစို့။ သငျသညျစိတ်ကူးစိတ်သန်းမပါဘဲဘယ်လို masturbate သလဲ?
သင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဖြစ်နိုင်ပါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကိုသင်ရပ်စဲလိုက်သည့်အခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ရပ်တန့်သွားသည်။ အဆိုပါစိတ်ကူးစိတ်သန်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမဟုတ်ဘဲအလေ့အထဖြစ်သည်။ ဒီစိတ်ကူးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုကို whirlpool လိုနှိုးဆွပေးပြီးအဲ့ဒီအရှိန်ကသင့်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တွန်းအားပေးသည်။
သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့် (နှင့်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ဖိအားပြင်းထန်လျှင်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားအတွက်) ရှိပါကသင်တတ်နိုင်သလောက်ပုံနည်းနည်းသာသုံးပါ။ မျက်နှာမသုံးပါနဲ့။ မည်သူမျှသူတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်း မှလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှမျက်နှာချင်းဆိုင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမပေးခဲ့ပါ။ သင်ကယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်မိန်းမအင်္ဂါ၏ပုံကိုသာသုံးပါ။ ရုပ်ပုံများကိုထိုတစ်ခုတည်းသို့ချထားပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အမှန်တကယ်နှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်ကိုမစဉ်းစားခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏တွန်းအားသည်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားမည်။ သင်ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းရဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးမှလွတ်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ယခုစတင်ပါ သင့်ရဲ့အာရုံထဲမှာရှိပါ။ သင်၏စိတ်ထဲမှ - သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲ၌ရှိနေပါစေ။ ဘယ်မှာလဲ တာဝန်သိပါ။
ဒါပေမယ့်သင်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်သင်ဟာအပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားရဘူး၊ သင့်ကလေးတွေကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားရစေချင်ဘူး၊ အပြစ်သည်လူငယ်နှင့်လူကြီးနှစ် ဦး စလုံး၏စရိုက်ကိုပုံပျက်စေသည်။ အမှားသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအလွဲသုံးစားမှုတွင်လုပ်ရပ်အတွင်းသာမကစိတ်ကိုနှစ်သက်ရာနေရာတိုင်းတွင်လှည့်လည်ခွင့်ပြုသည့်ပုံမှန်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
masturbate ဖို့မလှူယနေ့နီးပါးတစ်လောကလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမိတ်နှင့်မျိုးပွားဖို့အားလုံးကိုတိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အတွက်အလိုလိုအထီး drive ကိုကနေဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတိတ်ထဲမှာထလေ၏။ လူ့တိရစ္ဆာန်၏အမှု Self-ဝိညာဏ်ခွင့်ပြုခဲ့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သက်ရှိအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု, အပြုအမူ, စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အပြင်။ ဤသည်ဒြေမျိုးစိတ်၏ကျန်ငြင်းဆိုပေမယ့်သူ့ရဲ့အဆင်မပြေတာရှိပါတယ်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတွက်အပြစ်ရှိတယ်နှင့် Self-သံသယထုတ်လုပ်သည်။
တိရစ္ဆာန်ရုံရှိမျောက်အထီးသည်အလွန်တရာမှဆိုးဝါးသောအဆက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပြစ်ရှိသည်ဟုမခံစားရခြင်းနှင့်အတူတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည်။ လူနှင့်မတူဘဲသူသည်ဂရုမစိုက်တတ်သူဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်တာ၊ မျောက်ကသာခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်သူခံစားရတယ်၊ မခံစားနိုင်ဘူးဆိုတာမခံစားရဘူး။ ဒါကြောင့်မျောက်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမဖန်တီးနိုင်ဘူး။ လူတစ် ဦး တည်းပိုင်ဆိုင်သည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖန်တီးနိုင်သည့်စွမ်းအားသည်အခြားသတ္တဝါများနှင့်ခွဲခြားထားသောမိမိကိုယ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်ယခင်ထူးခြားသောဖန်တီးမှုလက်ဆောင်ကိုအတိတ်ကလိင်ဆိုင်ရာပုံများနှင့်အတိတ်စိတ်ခံစားမှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်အလွဲသုံးစားလုပ်သောအခါသူ၏တိရိစ္ဆာန်အတိတ်၊ စက်မှုတိရိစ္ဆာန်မောင်းနှင်မှုသို့ပြန်သွားကာချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ထို့နောက်သူသည်မပျော်တော့ပါ။
အကယ်၍ မျောက်တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်ရန်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပါကမိမိကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့ခြင်းများခံစားရလိမ့်မည်။ သို့သော်သူ၏တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်မျိုးပွားရန်ဖြစ်သည်။ မျောက်တွေကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရုံတင်မကဘူး၊ လူသည်မိမိစိတ်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးသူ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သူသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, Fantasy နှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော
မှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း - တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Psychopathology နှင့် Prostate အလုပ်မဖြစ်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်: Quinsey အပေါ် (2012) Comment